Zụta Megestrol acetate ntụ ntụ (595-33-5) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Megestrol acetate ntụ ntụ
Rating: SKU: 595-33-5. Category: Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Megestrol acetate powder (595-33-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Megestrol acetate ntụ ntụ isi agwa
Usoro Molecular: C19H26O3
Megestrol acetate okirikiri
Aha aha: Megace, Megace ES
Aha njirimara: megestrol (Pronunciation: meh JESS trol)
Megestrol acetate eji
A na-eji MGA mee ihe dị ka agụụ na - akpali iji kwalite uru bara uru n'ọnọdụ dịgasị iche iche. Mgbe a na - enye ya n'ọtụtụ dị elu, o nwere ike ịbawanye agụụ na ọtụtụ ndị mmadụ, ọbụna ndị nwere ọrịa cancer, ma na - ejikarị eme ka agụụ na - nweta ndị ọrịa nwere ọrịa kansa ma ọ bụ ọrịa HIV / AIDS na-ejikọta ya. Tụkwasị na mmetụta ya na agụụ, MGA nwere mmetụta na-akpata antiemetic.MGA na-ejikwa ya dịka onye na-agwọ antineoplastic na-agwọ ọrịa cancer ara na cancer cancer endometrial. iji mee ka ndị na-eme ihe na-eme ka ahụ ghara ịdị irè ma ọ bụrụ na a na-agwọ ọrịa cancer ma ọ bụrụ na a naghị agwọ ya. A na-ejikarị ya eme ihe na nkwonkwo ime ihe ọnụ na nke ethinylestradiol ma ọ bụ mestranol, ma jiri ya na ọgwụ nkwonkwo ejikọta na estradiol nakwa.
Ọ bụ ezie na a kwadoghị ya iji mee ihe ndị a, ana mụọ ma / ma ọ bụ jiri ya mee ihe - rịọ maka ụdị ihe dịgasị iche iche gụnyere ọgwụgwọ homoneusal hormone na ọgwụgwọ ọkụ ọkụ, ọrịa gynecological / menstrual, endometriosis, hyperplasia endometrial, cancer cancer ovarian, ọrịa cancer prostate, hyperplasia prostatic benign, cancer ara na-alụ nwoke, na ogologo oge.
A na - enweta Mmetụta Mmetụta site na 400 na 800 mg / ụbọchị. Nhazi usoro kachasị mma na mmetụta kachasị maka mmetụ nke agụụ ka enwere 800 mg / ụbọchị. Ọgwụ usoro ọgwụ MGA maka ọrịa kansa bụ 40 mg ugboro anọ kwa ụbọchị (160 mg / ụbọchị dum), mgbe a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe na usoro 40 ruo 320 mg / ụbọchị na nhazi dị iche iche maka cancer cancer endometrial. E jiriwo ya na nkwụsịtụ ala (eg, 1-5 mg / day ọnụ ọgụgụ, 25 mg / ọnwa im) ya na estrogen maka ebumnuche ọgwụgwọ.
Kedu ihe bụ usoro nke Megestrol acetate (CAS 595-33-5)
MGA dị dịka 5 mg, 20 mg, na 40 mg na mbadamba ụrọ nke 40 mg / mL, 125 mg / mL, 625 mg / 5 mL, na 820 mg / 20 mL.It ji mee ihe na 1 mg, 2 mg, 4 mg, na 5 mg na ọgwụ mgbochi ejikọta ọnụ. E jiriwo ọgwụ mee ihe na 25 mg na estrogen na ngwakọta ọgwụ mgbochi.
Otú Megestrol acetate si arụ ọrụ
MEGACE (megestrol acetate, USP) Oral Suspension nwere megestrol acetate, mmepụta ihe mmepụta ihe nke horroone na-emekarị, progesterone. Megestrol acetate bụ ọcha, akwa siri ike dị ka 17α- (acetyloxy) -6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione. Solubility na 37 Celsius C na mmiri bụ 2 μg kwa mL, solubility na plasma bụ 24 μg kwa mL. Mkpụrụ ya dị arọ bụ 384.51. Ụdị edemede ahụ bụ C24H32O4.
Megestrol nwere ike imerụ nwatakịrị a na-amụbeghị amụ ma ọ bụ mee ka ọ mụọ nwa. Ejila mygestrol mee ihe ma ọ bụrụ na ị dị ime.
Tupu ị na-ewe ihe megestrol, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga ma ọ bụ n'akụkọ ihe mere eme nke ọrịa strok ma ọ bụ eriri ọbara.
Ọdịdị gị chọrọ ịgbanwe ma ọ bụrụ na ịwa ahụ, na-arịa ọrịa, na-enwe nrụgide, ma ọ bụ nwee ọrịa. Agbanwela usoro ọgwụ gị ma ọ bụ oge ị na-ejighị ndụmọdụ dọkịta gị.
Megace ES nwere ọkwa dị elu nke megestrol karịa Megace. Jụọ onye na-ere ọgwụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọgwụ ị na-enweta na ụlọ ọgwụ.
Meblerol acetate kacha ntụ
Megentrol acetate Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ
Mkpụrụ Megestrol acetate nwere mmetụta ọ bụla
Mmetụta kachasị mma nke MGA bụ uru dị arọ, na-enwe mmetụta nke 15 gaa na 70% na nnukwu dosages eji agwọ ọrịa kansa. Ihe ndị ọzọ metụtara gụnyere ọbara ọgbụgba (7-8%), ọgbụgba (7%), na edema (5%), yana ndị ọzọ dị ka dizziness na mkpụmkpụ nke ume.MGA nwere ike ime ka hypogonadism na mgbaàmà ndị yiri ya dị ka ọdịdị nke abụọ nke mmekọahụ, mmekorita nke nwanyị, osteoporosis, na infertility na-agbanwe agbanwe na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị premenopaus. ụbụrụ anabolic dịka oxandrolone, nandrolone decanoate, ma ọ bụ testosterone n'ime ụmụ mmadụ nwere ike belata mgbaàmà MGA nke metụtara hypoandrogenism yana enwekwu mmụba na uru bara uru.Ọ bụ ihe kachasị njọ ma mmetụta dị njọ nke MGA gụnyere ọrịa obi obi / ọrịa thromboembolic dịka thrombophlebitis. O nwekwara ike ime ka nsogbu glucocorticoid dị ka ọrịa Cushing, dịka ọrịa shuga na-arịa ọrịa steroid, na afọ ojuju na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa shuga. e bipụtara.
Otu esi zụta Megestrol acetate ntụ ntụ si AASraw